Shir balaadhan oo lagu dardar gelinayo Ololaha Xisbiga Kulmiye ee doorashada ayaa lagu qabtey Laanta East London ee Xisbiga Kulmiye UK. : SalaanMedia
Shir balaadhan oo lagu dardar gelinayo Ololaha Xisbiga Kulmiye ee doorashada ayaa lagu qabtey Laanta East London ee Xisbiga Kulmiye UK.
xamse | May 15, 2017
Monday May 15, 2017 –
Shirkan oo ahaa mid looga gol lahaa bilaabid ololaha dorashada Madaxtooyda Somaliland ee dhici doonta 13/09/17
Shirkan oo ahaa mid looga gol lahaa bilaabid ololaha dorashada Madaxtooyda Somaliland ee dhici doonta 13/09/17 ayaa waxaa ka so qayb galay Laamaha Xisbiga kulmiye UK iyo marti sharaf kale. Ugu horeeyn Gudoomiyaha Laanta East London Siciid X Xasan ayaa soo dhoweeyn balaadhan u sameeyay dadkii ka soo qayb galay, isaga oo uga mahad naqay martid meelaha fogfog ka soo kacitimay.
Guddomiyaha Laanta Xisbiga kulmiye ee sheffield Mudane Yashin Carbooshe ayaa aad ugu mahadnaqay Gudoomiyaha Laanta East London iyo Guddiga Fulinta abaabulaka iyo dardargalinta ay ka bilaabeen Uk.
Xoghayaha Cardif Siyaad ayaa aad iyo aad u soo dhaweeyay, kana waramay waxqabaka Laanta Cardiff iyo qorshayashooda mustaqbalka dhaw.
Xoghayaha Laanta North London muddane Cali ayaa aad ugu mahad naqay Laanta East iyo kaalintii ay kaga jirtay ololihii doorashadii hore iyo sida wanaagsan ee ay iminka isu abaabushay.
Gudomiyaha Laanta North-West Muddane Abdi Qawdhan ayaa uga mahadnaqay Laanta East london casuumada iyo hormoodka ay ka noqdeen ololaha doorashada inagu soo fooda leh.
Guddomiyaha West London Muddane Rooble ayaa ka warmay waxqabaka Laanta iyo sida ay ugu diyaar garawday ka qayb galka doorashada Madaxtooyada . Sidoo kale Guddomiyaha Laanta South-East Muddane Faysal ayaa u mahad naqay Laanta soo casuntay iyo dardargalinta ay bilowday.
Guddomiyihii hore ee Laanta Graeter Manchester Munchester Eng Jama Ali Farah ayaa si xamaasadaysan uga hadlay kaalinta qurbajoogu ku leeyihiin Xisbiga Kulmiye iyo sida hadda loogu bahanyahay in loo sii adkeeyo.
Oday Bare Aw Gaab Dagaal, ahana Khasnajiga Sheffield ayaa khudbad baladhan halkaa ka soo jeediyay, isaga oo si gaar ah Xisbiga Kulmiye Uk ugu xilsaartay in uu soo sameeyo cilmi baadhis ku taxaluqda sida qurbajooga xisbigu uga hawlgali karan doorashada iyo kaalmaha ay buuxin karan isaga oo 16/5/17 u ambabaxaya waddankii hooyo.
Oday Faysal Baadhe oo ka mid ah odayaasha East London ayaa ku guubabiyey taageerayasha Xisbiga sidii qayb libaax ugu qaadan lahayeen taageerada Xisbiga.
Xubno ka mid ah Guddiga Fulinta ayaa iyana halkaa hadalo caaqiibo leh ka soo jeediya oo ay ka mid ahaayeen Guddomiye Xigeenka Kowaad iyo labaad, Gudomiyaha Wacyigelinta, Gddomiyaha Garabka Haweenka, Xidhiidhiyaha iyo Gudoomiyaha Cilmi baadhista. Ugu danbaytii waxaa soo Gunaanaday Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Mudane Xariir Xirsi Adar, isaga oo uga mahad celiyey Laanta East London xaflada quruxda badan iyo aaraadii wanaagsanayd ee madasha laga soo wada jeediyey. Guddomiyuhu waxaa uu khudbad dheer oo guubaabo dhinacyo badan taabanaysa ka soo jeediyay madasha isaga oo saldhig uga dhigay seddex qodob oo kala ah
1) ka qayb qaadashada dhaqaalaha
2) diyaar garawga muraaqibiinta iyo
3) hawl dhammaystiran oo warbaahinta Kulmiye UK ku dhaqaaqdo. Waxaanu Guddomiyahu faray dhamman Guddomiyayaasha Laamaha in ay sii laban laaban dhaqaale ururinta Xisbiga isaga oo uga mahadnaqay dhaqaalaha ay xisbiga u direen iyo balanqaadyada kama dambeeysta ah ee ay sameeyeen.
Guntii iyo gabagabadii shirka waxaa la isla qaatay in seddexda qodob xoogga la saaro oo si dhakhso ah loo dhammystiro hawlaha calculus ee inoo yaal mustaqbalka dhaw.
Guddiga Warbaahinta Xisbiga Kulmiye Uk
« Gudoomiyaha Xisbigga KULMIYE Oo Shacabka Ka-Tacsi-yaddeeyay Marxuum Gaashaanle Sare Cismaan Cabdillaahi Siciid May 15, 2017
Daawo:Xisbiga Waddani Finland oo Qabsaday Xaflad Meeqaamkeedu sareeyo & Waxay daaranayd.. 15th May, 2017 »